Nhau - Nhau dzekutanga Ndezvipi zvinoonekwa zvekubatana kwepasi rose?
Nhau dzekutanga Ndeapi maitiro eakasangana akabatanidzwa?
Iko kubatanidza kwepasirese kunoshandisa hunhu hwayo mashandiro
iyo torque uye kufamba kunogona kutapurika zvakavimbika. Hunhu hwekubatanidza kwepasirese ndewekuti: chimiro chine akasiyana makona anopinda, uye mairi axial anosanganisira emakona ekubatanidza kwepasirese akasiyana, kazhinji pakati pe5 ° -45 °.
Yese yakabatana yekubatanidza kushandiswa
Mune yekumhanyisa-kumhanya uye inorema-basa simba kutapurirana, kumwe kubatanidza kune mabhaudhi, uye pasi pemamiriro ekunyorova, anoitwa kutenderera pamwechete kuendesa zvikamu zvemuchina zveiyo inomhanyisa kumhanya. Uye uvandudze mashandiro anoshanda e shafting. Iyo coupling inoumbwa nehafu mahafu, ayo akateedzana akabatana neyekutyaira shaft uye inotyairwa shaft. Kazhinji, michina yemagetsi inowanzo kuve yakabatana nekubatanidza uye michina yekushanda.
Kune mamwe marudzi eepasi rose akabatanidzwa coupling
Iko kubatanidza kune maviri akabatana miseve. Nekuda kwekukanganisa uye yekumisikidza yekukanganisa, post-deformation uye tembiricha shanduko, iyo hama nzvimbo yemaviri miseve ichachinja, uye kuomarara kuenderana kazhinji hakuvimbiswe. Zvikamu, kunyangwe iine kugona kubhadharisa akasiyana hama dzakatamiswa, ndiko kuti, kana ichigona kuchengetedza kubatana basa uye chinangwa chekubatanidza pasi pemamiriro ehukama hwekubva. Coupling inogona kukamurwa kuita yakaoma coupling, inochinja coupling uye chengetedzo coupling. Mhando huru dzekubatanidza, hunhu uye yavo basa muchikamu chemashoko muhutachiona system
Rigid coupling inogona chete kuendesa kufamba uye torque pasina mamwe mabasa, kusanganisira bidirectional coupling, sleeve coupling, clamp couplings, nezvimwe.
Zvichienderana coupling Zvichigadziriswa coupling zvisina elastic zvinhu hazvigone chete kufambisa kufamba uye torque, asi zvakare zvine akasiyana madhigirii ekutanga. Radiyo uye angular muripo unoshanda unosanganisira magiya ekubatanidza, kubatanidza kwepasirese, Kubatanidza ketani, kubatanidza mutserendende, diaphragm coupling, nezvimwe.
Iyo inoshanduka kubatanidza pamwe neyakagadziriswa zvinhu zvinogona kuendesa kufamba uye torque; ine akasiyana madhigirii ekutanga, eredhiyo uye engular muripo kuita. iyo zvakare ine akasiyana madhigirii ekudengenyeka kwekudzora uye kubhaiza, kuvandudza mashandiro ekushanda kweiyo hutachiona sisitimu inosanganisira Akasiyana-siyana anochinjika coupling neasina-simbi elastic zvinhu uye zvinoshanduka kubatanidza nesimbi elastic zvinhu. Maumbirwo emhando dzakasiyana dzekubatanidza dzakasarudzika dzakasiyana, kuitisa kwakasiyana, uye iro basa mune yekufambisa system zvakare yakasiyana.
Flexible chengetedzo yekubatanidza zvakare ine akasiyana mazinga ekubhadharisa mashandiro, kusanganisira pini mhando, kukweshesana mhando, yemagineti upfu mhando, centrifugal mhando, hydraulic mhando uye kumwe kuchengetedzeka kwekubatanidza
Iko kukura uye kutungamira kwehukama kufambiswa kwemasanhu maviri. Kana zvichinetsa kuchengetedza kuomarara uye kuenderana kwema shafts maviri mushure mekumisikidza uye kugadzirisa, kana kana iyo miseve miviri ichizokanganisa nekuwedzera kufambiswa kwehukama panguva yekushanda, iko kusanganisa kubatanidza kunofanira kuchinjwa. Semuenzaniso, kana iyo radial displacement iri mune axial direction, iyo inotsvedza coupling inogona kusarudzwa, uye angular displacement inopinda kana kupindirana miseve miviri inogona kuve yakabatana neyepasi rese coupling.
Kuvimbika uye kushanda nharaunda yekubatanidza. Kubatanidza kusingade lubrication kazhinji kunogadzirwa nesimbi yezvinhu uye kunovimbika; coupling dzinoda lubrication dzinokanganisika zviri nyore nehuremu hwekugadzirisa uye dzinogona kusvibisa nharaunda. Coupling ine isiri-yesimbi zvinhu senge irabha inonzwisisa kupisa, media inoparadza uye mwenje wakasimba, uye inowanzo kukwegura.
Nekuda kwezvikonzero zvakaita sekugadzira, kumisikidza, mutoro deformation uye tembiricha shanduko, zvinonetsa kuti uchengetedze kuomarara uye kwakaringana kuenderana kwemasipisi maviri mushure mekumisikidza uye kugadzirisa. Iko kune imwe nhanho yekufambisa mune iyo x uye Y mafambiro uye kona yekutsauka CI. Kana iyo radial displacement iri hombe, iyo inotsvedza coupling inosarudzika, uye iyo angular kufambisa inopinda kana kuyambuka miseve miviri inogona kuve yakabatana neyepasi rese coupling. Kana iyo miseve miviri ichiburitsa yakawedzera hama kufambiswa nekuda kwekukanganisa panguva yekushanda, kubatika kunochinja kunofanira kusarudzwa.